Afhayeenka Gobolka Banaadir oo ka hadlay Xaaladda Caabuqa Corona Virus Iyo Bisha Ramadaan - Latest News Updates
Afhayeenka Gobolka Banaadir oo ka hadlay Xaaladda Caabuqa Corona Virus Iyo Bisha Ramadaan
Muqdisho; 23 April 2020. Waxaan ugu horeyn Ummada Muslimiinta gaar ahaan ummuda Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Iyo dibadda ugu Hambalyeenayaa curushada Bisha Barakeysan ee Ramadaan. Bisha Raxmada, Bisha Cibaadada, Bisha Is-cafinta, Bisha Isku gar-gaarida.
Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Banaadir ee Caasimadda dalka Soomaaliya waxa aan xasuusinayaa in Bishaan Ramadaan ee sanadkaan 2020 uu kusoo beegmay xilli caalamka iyo dalkeena uu la daalaa dhacayo Caabuqa Corona Virus (COVID19) kaasi oo galaaftay tiradii ugu badneed ee dad ku dhinta dunida, Isla markaana hada la il daran kumanaan kale.
Dalkeena oo markii horeba la daalaa-dhacayay dhibaatooyin kale, isla markaana ku jira soo kabasho Dowladnimo, diyaarna aan u aheyn in uu xamilo cudurkaan, Shacab ahaan iyo Dowlad ahaan intaba, ayaa hadana waxaa ay Dowladda Federalka Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir u istaageen xakameynta Caabuqa COVID19 taasi oo aan loogu maarmin, Mas’uul iyo Shacab, Culimo iyo Caamo, Waayeel iyo Dhalinyarro intaba in ay ka wada qeyb qaataan dadaalada loogu hortagayo faafida COVID19, taasi oo xalkeeda ah in la raaco fariimaha Caafimaad iyo Wacyigelinta la xariira ka hortaga Caabuqa COVID19.
Shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Gobolka Banaadir ee Caasimada dalka Soomaaliya, waxaan ugu baaqaya iyagoo raacaya Talooyinka iyo Fariimaha Caafimaad, Gudanaya waajibkooda Diiniga ah, in ay isu gar-gaaraan oo ay Caawiyaan walaalahooda nugul ee u baahan in la caawiyo, maadaama marxalada aan maanta ku jirno ay tahay mid aan loogu maarmin in gacmaha la is qabsado, la is gar-gaaro, isla markaana la isku Naxriisto.
Shacabka Gobolka Banaadir. Waxaan ognahay in kooxaha Nabad-diidka ay Bisha Ramadaan fuliyaan weeraro iyo beegsi shacab, si aan ugu guuleysano argagixisada dooneysa shacabkeena oo dhibaatooyin xoogan la daalaa dhacaya in ay sii dhibaateeyaan, waa in aan u midownaa oo aan si wadajir ah ugu shaqeynaa amniga dalkeena anagoo gacan siineyna Hey’adda-heena Amniga iyo Wiilasheena Soomaaliyeed ee naftood hura-yaasha ah, si ay ugu fududaato gudashada waajibaadka loo igmaday.
Hey’adda-heena Amniga iyo Ciidamadeena geesiyaasha ah ee aan ku jiifano kuna soo kacno, ee naftooda noo huray, waxaan leeyahay Mahadsanidiin. Waxaan kaloo ugu baaqayaa in ay sii laba jibaaraan adkeenta Amniga, ku da-daalida u turida Shacabka. Bisha Ramadaan awgeedna ay xurmo dheeri ah u fidiyaan Shacabkooda.
Maamulka Gobolka Banaadir iyo Dowladda Hoose ee Xamar, waxaa ay dadaal dheeri ah ku bixin doonaan sidii loo gaari lahaa shacabka danta yar, kuwa nugul iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba ee iyagu u baahan in ay caawinaad helaan. Ganacsatadada iyo Bulshada inta awooda leh waxaan iyaguna ugu baaqeynaa in wixii karaan-kooda ah ay la gaaraan walaalahooda.
Dalkeena waxa uu ku jiraa dagaal dhinacyo badan leh oo ay ka mid yihiin; La dagaalanka Argagixisada Nabada, Nolosha iyo Dowladnimada noo diidan. La dagaalanka iyo ka hortaga cudurka saf-mareenka ah ee Corona Virus (COVID19), iyo La dagaalanka Jahliga iyo Sabool-nimada. Kuwaasi oo dhamaantood aan kaga guuleysan karno anagoo si wadajir ah gacmaha is qabsano, is-caawino, is gar-gaarno, isla wada shaqeyno, u hogaan-sanno awaamiirta iyo fariimaha Madaxda dalka, taasi oo ah mida aan guusha ku gaari karno.
Waxaan dhamaanteen isku rajeeneynaa inagoo gacmaha is heysana in aan si nabad ah oo caafimaad qab ah ku gudano cibaadadeena, si nabad ah aan ku wada dhameesano bishaan Barakeysan ee Ramadaan, si nabad ahna aan ku gaarno maalinta Farxada ee Ciida.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir iyo Dowladda Hoose ee Xamar.
Saalax Xasan Cumar (Saalax Dheere)